China 12000w 20000w eriri laser ọnwụ igwe emepụta na suppliers |UNIONLASER
Ụdị: Agbachikwara elu ike eriri laser ọnwụ igwe
1. The ibu ngwa ngwa nnukwu format eriri laser bụ ezigbo maka ojiji na ụlọ ọrụ.N'ihi isi iyi laser 20kW, ọ dị mma maka ịkpụ osisi nwere oke ruru 70 mm.Ngwọta ọgbara ọhụrụ a na-eji eme ihe na-enye ohere iji chekwaa oge dị ukwuu ma mee ka arụmọrụ na ịdị irè nke ọrụ dịkwuo elu.
2. Nkewa anwụrụ anwụrụ.Igwe ahụ nwere mkpuchi mkpuchi, nke na-eme ka anwụrụ ọkụ na ájá dị n'ime.Mgbasa ozi siri ike na-asachapụ ikuku nke ọma, na-echebe oghere site na mmetọ.
3. Fiber laser 20 kW IPG.IPG YLS-CUT usoro elu ike laser isi iyi, ọkpụrụkpụ nke igwe anaghị agba nchara, aluminum na ihe ndị ọzọ nwere ike iru 70mm.
Ike Laser 20kw
Ụdị Laser Raycus fiber laser isi iyi (IPG maka nhọrọ)
Ọsọ njem kacha 80m/min, Acc=1.2G
Sistemụ Chain Igus ika emere na Germany
Sistemụ ịnya ụgbọ ala Japanese YASKAWA Servo moto nwere onye na-ebelata
Ọnọdụ jụrụ oyi Mmiri Chiller na usoro nchebe
Tebụl na-arụ ọrụ Tebụl na-agbanwe agbanwe
Ịrụ ọrụ ntụgharị electro-optical dị elu
Ogologo eriri mmepụta ahaziri iche
Ogologo ikuku etiti: (nm): 1080±5
Ugboro mgbanwe kacha elu: (kHz): 2
Raytools autofocus igbu isiNa-enweghị mmezi mgbado anya n'aka.Usoro nke usoro -10mm - + 10 mm, nkenke nke 0.01 mm bara uru ma a bịa n'ihe dị iche iche nke ọkpụrụkpụ (0-20 mm).
Gantry nke annealed ụgbọ elu aluminum
Ihe owuwu nke gantry bụ nke aluminom ụgbọ elu annealed, nke ejiri ike nke 4300 tonne, na-enweta nkwụsi ike na-enwetụbeghị ụdị ya.Aluminom ụgbọ elu nwere ọtụtụ uru: elu siri ike (dị elu karịa nkedo ígwè), obere uka, iguzogide corrosion na oxidation yana ike na-arụ ọrụ.
1 Ụlọ ọrụ ịchọ mmaN'ihi na elu na-agba na mgbanwe ọnwụ nke eriri laser ọnwụ igwe, ọtụtụ mgbagwoju ndịna-emeputa nwere ike ngwa ngwa hazie site oru oma fiber laser ọnwụ usoro na ọnwụ pụta enwetawo ihu ọma nke ịchọ mma ụlọ ọrụ.Mgbe ndị ahịa nyere iwu nhazi pụrụ iche, enwere ike bepụ ihe ndị dị mkpa ozugbo mgbe emechara ihe osise CAD, ya mere ọ dịghị nsogbu na nhazi. 2 Ụlọ ọrụ ụgbọ alaỌtụtụ akụkụ metal nke ụgbọ ala, dị ka ọnụ ụzọ ụgbọ ala, ọkpọkọ iyuzucha ụgbọ ala, breeki, wdg nwere ike ịhazi ya nke ọma site na igwe eji egbutu eriri laser.Tụnyere omenala metal ọnwụ ụzọ dị ka plasma ọnwụ, eriri laser ọnwụ ana achi achi magburu onwe nkenke na-arụ ọrụ arụmọrụ, nke ukwuu mma na arụpụtaghị na nchekwa nke ụgbọala akụkụ.
7 Akụrụngwa mgbatị ahụP 8 Ụlọ ọrụ ngwa ngwa
Nke gara aga: CNC Pipe na efere Laser Cutting Machine
Osote: High nkenke eriri laser ọnwụ igwe